Sprout Bulsheed: Kordhi ka-qaybgalka Baraha Bulshada ee Daabacaada, Dhageysiga, iyo Platform-ka Udoodida | Martech Zone
Weligaa ma raacday shirkad weyn oo khadka tooska ah oo kaliya si aad uga niyad jabto tayada nuxurka ay wadaagayaan ama ka-qaybgal la'aanta ay la leeyihiin dhagaystayaashooda? Waa calaamad muujinaysa, tusaale ahaan, in la arko shirkad leh tobanaan kun oo shaqaale ah iyo wax yar oo la wadaago ama jecel yihiin nuxurkooda. Waxay caddayn u tahay in aanay si fudud u dhegaysanayn ama aanay runtii ugu faanayn nuxurka ay horumarinayaan.
Gears of content warbaahinta bulshada wax soo saarka ma aha inay noqdaan gears gabi ahaanba. Sida aadan u dhex gelin dhacdo iskuxiran, u dhiib kaararkaaga qof walba, oo aad ka baxdo adigoon waligaa qofna la hadlin, waa inaadan sidoo kale taas ku samayn baraha bulshada. Baraha bulshada waa meel fantastik ah oo shirkadaha si ay u bartaan waxa dhagaystayaashooda ay daneeyaan, wadaagaan aqoonta qiimaha leh, oo ay koraan rajada rajada iyo macaamiisha aqoonsan in calaamaddu ay dhab ahaantii danayso iyaga.
Dabcan, tani waxay u baahan tahay dadaal. Maareynta joogitaanka warbaahinta bulshada ee guud ahaan aaladaha waxay noqon kartaa mid daal badan - markaa helitaanka madal ku caawin karta waa lama huraan.
Iskugeyn bulsho waa hogaamiye caan ku ah isticmaalka, taageerada macaamiisha iyo ku qanacsanaanta, ROI iyo korsashada isticmaalaha, sida ay u bixiyaan goobaha ugu sareeya ee software-ka. Waxay leeyihiin in ka badan 30,000 oo summadood iyo ururo kala duwan oo ka faa'iidaysanaya qalabkooda.
Madalkooda maareynta warbaahinta bulshada oo dhan-in-mid ah ayaa u sahlaysa summadaha inay furaan awoodda buuxda ee warbaahinta bulshada si ay u beddelaan suuqgeyntooda warbaahinta bulshada, adeegga macaamiisha bulshada, iyo sidoo kale inay dhisaan u doodista khadka tooska ah iyagoo isticmaalaya shaqaalaha iyo saameeyayaasha. Madalku waxa uu leeyahay sifooyinka muhiimka ah ee soo socda:
Dhageysiga Warbaahinta Bulshada - Faham dhagaystayaashaada, daaha ka qaad isbeddellada, oo ka hel fikrado la taaban karo oo laga helo xogta bulshada si aad u ogeysiiso astaantaada iyo istiraatiijiyadda ganacsiga.
Daabacaadda Warbaahinta Bulshada - qorshee, abaabul, jadwal oo u gudbi macluumaadka koox ahaan oo leh daabacaad bulsho oo isku xidhan.
Ka Qaybqaadashada Warbaahinta Bulshada - hagaajin la socodka bulshada oo ku hagaaji ka jawaab celinta sanduuqa midaysan si aad ula macaamilto bulshadaada guud ahaan aaladaha warbaahinta bulshada.
Falanqaynta Warbaahinta Bulshada - Ku wad go'aan qaadashada istaraatiijiga ah ee ganacsiga oo dhan adoo wata xog bulsho oo qani ah iyo dashboards.
U doodista Baraha Bulshada - ku dhis summadaada khadka tooska ah adiga oo siinaya shaqaalahaaga hab fudud oo ay ku wadaagaan macluumaadka la soo koobay ee shabakadaha bulshada.
Haddi aad tahay maamulaha warbaahinta bulshada, suuqgeeye baraha bulshada, wakiilka daryeelka macaamiisha warbaahinta bulshada, falanqeeye, ama istiraatijiyad - Iskugeyn bulsho waxay ku siinaysaa dhammaan agabka aad u baahan tahay si aad u dhisto, otomaatig u samayso, oo aad u wanaajiso istaraatiijiyadaada suuqgeynta warbaahinta bulshada.
Bilow Tijaabada Bulsheed ee sprout ee bilaashka ah
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Iskugeyn bulsho waxaanan isticmaalayaa isku xirka xidhiidhkayga qoraalkan oo dhan.
Tags: dhageysiga bulshadawarbaahinta bulshadau doodista warbaahinta bulshadafalanqaynta warbaahinta bulshadakalandarka warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada sirdoon tartanhawlgelinta warbaahinta bulshadadhageysiga warbaahinta bulshadaMedia Social Suuqdaabacaadda warbaahinta bulshadabulsheedbulsho ahaan
Movavi: Waa Qayb Tafatirka Fiidiyowga ah oo loogu talagalay Ganacsiga Yaryar si loo Soo saaro Fiidyowyo Xirfad leh